Fampiharana Android: hevitra, famoahana vaovao, maimaim-poana ary maro hafa! | Androidsis (Pejy 20)
Fampiharana hananana ny zava-drehetra eo am-pelatanana avy amin'ny swipe: Lazy Swipe
Anisan'ireo mieritreritra ve ianao fa ny fihetsika swipe no iray amin'ireo zavatra tsara indrindra noforonin'izy ireo? Avy eo dia tianao ny mifehy saika ny zava-drehetra amin'ity fampiharana Lazy Swipe ity.
Te hiala amin'ny sigara ve ianao? Andramo ny Android app Respirapp
Ao amin'ny Google Play misy fampiharana isan-karazany sy ho an'ny mpihaino rehetra. Amin'ity tranga ity dia miresaka momba Respirapp izahay, fampiharana iray ahafahanao miala amin'ny sigara.
Nokia HERE Maps dia mamela ny beta miaraka amina vaovao mahaliana
Nokia HERE Maps dia mamela ny dingana beta ho lasa kinova miorina amin'ny fanavaozana vaovao izay mitondra fanatsarana mahaliana maro
Jereo ny fiankinan-doha amin'ny finday avo lenta amin'ny Instant
Raha te hahalala ny fotoana ampiasanao amin'ny fampiharana tsirairay napetraka amin'ny telefaonao ianao dia Instant no fampiharana tonga lafatra ho azy
SlideLock dia fampiharana mahaliana hafa ho an'ny hidin-trano izay mitondra ny lantona amin'ny Material Design sy interface tsotra
Flipboard dia manana ny kinova an-tranonkala
Raha mampiasa an'ity serivisy ity isan'andro amin'ny telefaonao na ny takelakao ianao, manomboka anio dia azonao atao izany amin'ny kinova tranonkala
ScreenPop, hevitra vaovao fandefasana hafatra mivantana eo amin'ny efijery hidinao
Androany dia manolotra ny ScreenPop izahay, fomba iray vaovao hita maso sy maimaim-poana hifandraisana amin'ireo fifandraisantsika Android mivantana amin'ny efijery hidin'ny terminal.
Amin'ny alàlan'ny fanamarinana sy fiarovana fotsiny ny angon-drakitra Google anay dia afaka mahazo tahiry fanampiny 2Gb ao amin'ny Google Drive izahay
Manohy ao anatin'ny fizarana Applications izahay hisakafoanana sy hilelaka ny rantsan-tananareo miresaka momba ny fomba fahandro. Androany, manao izany amin'ny fampiharana Cooking Recipe isika.
Private Place, rindrambaiko fanaovana kajy izay manafina dialer mahery misy endri-javatra mahaliana (ROOT)
Na dia tena dialer mahery aza izy hanakanana antso, dia mahazoa SMS sy fiasa mahaliana hafa hiarovana ny tenanao amin'ny mason'ny olon-kafa.
[APK] InsTwoGram, ilay Instagram tsy ofisialy mamela anao hanana kaonty roa miaraka
InsTwoGram dia mamela antsika hanana kaonty Instagram roa samy hafa miaraka amin'ny fotoana iray.
Belle UI, fanavaozana fonosana kisary maimaim-poana amin'ny Lollipop
Belle UI dia fonosana kisary maimaimpoana tena mahaliana izay nohavaozina noho ny fanendrena anao amin'ny Android 5.0 Lollipop
Ovao ny efijery hidin-telefaonao amin'ny Pi Locker
Raha mitady rindranasa hanidy ny efijery findainao ianao izay misongadina noho ireo fiasa mahaliana sy ny interface mazava, tonga lafatra i Pi Locker
Nivoaka ny tsaho momba ny fahafahantsika mamantatra ny tenantsika amin'ny WhatsApp amin'ny alàlan'ny Facebook. Androany isika dia mamakafaka ny dikan'ny mpampiasa.
[APK] WhatsApp MD, ny maodelin'ny WhatsApp amin'ny endriny Material Design
Eto ianao manana ny APK an'ny WhatsApp MD, ny kinova WhatsApp Design for Android ho an'ny Android.
[APK] Salama Locker, ny efijery Lock Lock ho an'ny Android 4.0+
Anio dia asehonay anao ny Lock Lock ho an'ny Android 4.0 sy ny dikan-teny avo kokoa.
[APK] Sintomy ary apetraho ny mpilalao mozika CM12 amin'ny Android 4.4+ rehetra
Eto ianao manana ny mozika CM12, iray amin'ireo mpilalao mozika tsara indrindra ho an'ny Android
Grapefruit dia manana sary isan-karazany ho an'ny mpampiasa azy. Rindrambaiko mahaliana ho an'ireo tia sary amin'ny Android
Azo antoka fa ny famantaranandro tsara indrindra ho an'ny Android amin'izao fotoana izao dia ara-potoana noho ny hatsaran-tarehiny amin'ny hatsarana hita maso
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany Rutapa
Rutapa dia rindrambaiko natao hamoronana làlan'ny tapas sy hanome lanja azy ireo amin'ny mpanjifa miaraka amina andiana fitaovana mahaliana ho an'ny fahafinaretana gastronomika.
Manohy mividy serivisy sy fampiharana i Microsoft ary ny fahazoana vaovao dia ny kalandrie mamirapiratra antsoina hoe Sunrise Calendar 100 tapitrisa dolara
Lollipop dia efa nisy nandritra ny fotoana kelikely, na eo aza ny fanatsarana mahatalanjona, tsy ny mpampiasa rehetra no tena tsara.
WhatsApp koa te-hamafa WhatsAppMD
Toa resy lahatra i WhatsApp amin'ny fanafoanana ny rindranasa izay manome tolotra fanampiny mifandraika amin'ny sehatra fandefasan-kafatra ary tsy nahazo alalana.
Microsoft nandefa ny Screen Lock Lock, rindrambaiko fanidiana efijery maimaimpoana ho an'ny Android [APK]
Picturesque Lock Screen dia rindrambaiko Microsoft vaovao izay mitondra wallpaper Bing mahafinaritra amin'ny fitaovanao Android
[Video] Ahoana ny fametrahana Google Earth Pro maimaimpoana amin'ny Windows, Linux na Mac
Androany dia asehoko anao ny fomba fametrahana Google Earth Pro maimaimpoana amin'ny Windows, Linux na Mac.
Amin'ity fampiharana antsoina hoe Volume Unlock ity dia azonao atao ny mamadika ny efijery telefaona miaraka amin'ny fanalahidin'ny volume raha, na inona na inona antony, simba ny lakilen'ny herinaratra
Eto ianao manana ny apk sy ny video manazava izay anehoako anao ny fiasa vaovao amin'ny fizarana horonantsary amin'ny alàlan'ny Twitter 5.44 ary koa ny fiasa vaovao entin'ireo tarika.
[APK] Titanium Backup miaraka amin'ny mifanentana amin'ny Android Lollipop sy CM12
Eto ianao manana ity kinova vaovao an'ny Titanium Backup ity izay mifanentana tanteraka amin'ny Android 5.0 Lollipop sy Cyanogenmod 12.
[APK] Telegram 2.4 miaraka amin'ny safidy vaovao hampanginana ny fampandrenesana sy ny mety hampiakarana rakitra hatramin'ny 1,5 Gb
Eto ianao manana ny apk Telegram 2.4 miaraka amin'ny vaovao mahaliana toy ny fampanginana ny fampandrenesana avy amin'ny fifandraisana sy vondrona na ny mety fizarana rakitra hatramin'ny 1,5 Gb.
Afaka manao antso amin'ny WhatsApp ianao izao ... raha Root ianao
Afaka miantso amin'ny WhatsApp ihany ianao amin'ny farany. Ny fanavaozana farany ny serivisy fandefasan-kafatra malaza dia misy ny fiantsoana efa nandrasana hatry ny ela.
Ny Refrigerator mena sa mihinana fotsiny? Iza amin'ireo no hisafidy ny hanafatra sakafo any an-trano?
Ao an-trano izahay ary tsy te-hahandro. Inona no serivisy azontsika safidiana mba hanafarana sakafo ao an-trano amin'ny Internet? Ny Refrigerator mena sa mihinana fotsiny?
Ireo widgets kalandrie 3 tsara indrindra handaminana tsara kokoa isan'andro isan'andro
Ny widget misy ny kalandrie dia zava-dehibe amin'ny efijery finday hahitanao ny zava-mitranga rehetra amin'ny indray mipi-maso haingana
APPS Apk, pejy iray hisintomana ny rindranasa Android tianao indrindra ao amin'ny APK
APPS Apk dia pejin-tranonkala iray ahafahanao misintona ireo rindranasa Android tianao indrindra mankany amin'ny APK ary tsy mila fisoratana anarana.
Fampianarana fototra Android: Androany, ahoana ny fanovana ny sarin'ny piraofilinao WhatsApp
Fampianarana Android ifotony izay ampianaranay anao tsikelikely ny fanovana ny sary mombamomba anao WhatsApp
[APK] Google Chrome Beta 41 azo alaina
Efa ananantsika ny apk Google Chrome Beta 41 misy ny fanatsarana ny fahafahantsika manavao ireo pejin-tranonkala amin'ny fidinana ambany.
Ny kinova farany an'ny Microsoft Word, Excel ary PowerPoint dia misy amin'ny takelaka Android ankehitriny
Microsoft dia namoaka ny kinova farany an'ny Word, Excel, ary PowerPoint ao amin'ny Play Store. Fanampiny tena tsara
Microsoft mandefa ny mailaka fampiharana Outlook amin'ny Android
Ny rindranasan'ny mailaka ofisialin'i Outlook Outlook izao dia vonona ny hisintomana maimaimpoana avy amin'ny Play Store for Android
Miavaka i SimpleScan noho ny fahatsorany sy ny fampiasana azy ary tiany hiavaka amin'ny fifaninanana ho fampiharana mahery vaika
Ampere: fampiharana hifehezana ny fiampangana ny finday finday avo lenta
Raha te hahalala foana izay mitranga amin'ny baterinao ianao rehefa apetrakao amin'ny finday avo lenta ny findainao finday dia azonao atao izao amin'ny fampiharana Ampere maimaim-poana.
Avy any Etazonia, notondroin'ny polisy ho fampiharana tonga lafatra ho an'ireo "mpamono olona polisy" ny Waze raha te-hanidy ny SocialDrive izy ireo.
Firefox, Javelin, Maxthon, Opera na Dolphin dia mety ho iray amin'ireo mpitety tranonkala izay hisolo ny Chrome ho an'ny Android
Droid Unlatch: fampiharana hanokatra ny Android raha hadinonao ny pin
Ho an'ireo izay manadino ny pin, na mahita ny tenany mihoatra ny indray mandeha miaraka amin'ny findainy mihidy nefa tsy fantany izay hatao, dia tonga ny fampiharana Droid Unlatch.
[APK] Sintomy ny Facebook Lite, ny kinova an'ny Facebook natao ho an'ny terminal tsy dia matanjaka
Te-misintona ny Facebook Lite hapetraka amin'ny terminal Android 2.2 sy ny avo lenta ve ianao na dia tsy ao amin'ny Play Store ao amin'ny faritra misy anao aza izany?
Fampiharana kely, andiana fampiharana ho an'ny multitasking amin'ny Android
Ny multitasking amin'ny Android amin'ny alàlan'ny bubble na app mitsingevana dia mahatratra ambaratonga hafa amin'ny Tiny Apps
Fahadisoam-piarovana lehibe 2 izay misy fiatraikany amin'ny WhatsApp Web
Dimy andro monja taorian'ny première dia misy lesoka fiarovana roa matotra hita ao amin'ny WhatsApp Web, ilay fampiharana WhatsApp ofisialy ho an'ny solosainanao manokana.
Mandoa vola anao ny GELT hampiasana ny Android amin'ny fividianana isan'andro
Androany aho te hampahafantatra sy manoro hevitra anao GELT, fampiharana ho an'ny Android izay mampanantena anay fa hahazo vola amin'ny fampiasana ny Android amin'ny fividianana isan'andro.
Fampiharana Material Design 5 tsy azonao adino
Fampiharana Material Design 5 izay tsy hamela na iza na iza tsy hiraharaha ary izany no ohatra ambony indrindra amin'ny lamina famolavolana Lollipop vaovao
Mikorisa amin'ny findainao na ny takelakao mankany amin'ny solosainao miaraka amin'ny Weak Control [ROOT]
Weak Control dia fampiharana ho an'ny fitaovana manana tombontsoa ROOT mamela ny streaming ny efijery ao amin'ny PC
WhatSim: Teraka ny karatra SIM manokana natokana ho an'ny WhatsApp
Raha sahirana amin'ity herinandro ity amin'ny resaka vaovao mifandraika amin'ny sakana WhatsApp, dia teraka ny SIM voalohany hampiasa angona miaraka amin'io hafatra io.
Dialer & Fifandraisana amin'ny telefaona marina, iray amin'ireo mpampita hafatra tsara indrindra ho an'ny Android
Androany dia manolotra ny iray amin'ireo rindrambaiko Dialers tsara indrindra ho an'ny Android izahay, fampiharana iray hafa ho an'ny Dialer na Telephone Dialer misy safidy maro fanahafana sy fanaingoana.
Tehirizo ny toerana misy anao hiverina any aminy amin'ny fotoana rehetra amin'ny Location Saver
Location Saver dia rindranasa vaovao miaraka amin'ny tahiry hitahiry ny toerana misy anao ary miverina aminy
Ny fianjerana Google Now dia manakana ny fandraisam-peo amin'ny fakan-tsarinao Android
Nahita lesoka lehibe tao amin'ny Google Now izay manakana ny fandraketana horonan-tsary avy amin'ireo fakantsary fakantsary an'ny Androids, eny fa na ireo fakantsary fakantsary am-boalohany aza.
ClickLight, ampandehano ny jiro finday ataonao amin'ny tsindry indroa amin'ny bokotra herinaratra
ClickLight dia mampihetsika ny jiro amin'ny alàlan'ny fanindriana indroa ny bokotra herinaratra maimaim-poana tsy toy ny fampiharana hafa
Lahatsary manazava momba ny fomba fampiasana ny kinova an-tranonkala an'ny WhatsApp ankoatry ny fahafahanao misintona mivantana ny APK APK miaraka amin'ny hetsiky ny WhatsApp Web miasa.
WhatsApp Web dia misy izao, afaka fotoana fohy dia afaka mifehy ny WhatsApp amin'ny solosainanao manokana ianao
Afaka miditra amin'ny tranonkala ofisialin'ny WhatsApp Web isika izao, ilay tranonkala ahafahantsika mifehy ny kaonty WhatsApp avy amin'ny solosainay manokana.
LibreOffice izao dia misy amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Play Store
LibreOffice dia azo alaina ao amin'ny Play Store ankehitriny. Fivarotana birao loharano misokatra avo indrindra eto an-tany
Copa del Rey: FCBarcelona vs Atlético de Madrid afaka amin'ny Android-nao
Ireto misy rindrambaiko hijerena FCBarcelona vs Atlético de Madrid maimaimpoana amin'ireo Androids-nay.
WhatsApp + dia voatery nakatona noho ny tsindry avy amin'ny WhatsApp
WhatsApp dia nandefa taratasy tany amin'ny developer WhatsApp + nanoro hevitra azy hampitsahatra ny firoborobon'ny fampiharana ary esory ireo rohy fampidinana
LingLing, na ny fomba fianarana teny anglisy rehefa miala voly
Androany aho dia manolotra rindranasa hianarana Anglisy amin'ny fomba mahafinaritra be indrindra rehefa milalao izahay.
Sakanana WhatsApp mampiady hevitra: Fotoana izao handehanana telegram?
Ireto misy tombony sasany ho anao raha manapa-kevitra ianao raha toa ka mahafoy ny WhatsApp miova mankany Telegram.
Navoaka ny sary avy amin'ny kinova WhatsApp an'ny tranonkala
Ny mpanjifan'ny tranonkala WhatsApp dia iray amin'ireo fiasa andrasana indrindra hahafahana mampiasa ity serivisy ity amin'ny solosaina birao
Ho famaranana dia hazavaiko ny dingana rehetra harahina mba ho iray amin'ireo mpanandramana beta an'ny Instagram ho an'ny Android.
Raha voarara ny kaonty WhatsApp anao, eto izahay dia milaza aminao ny antony nahatonga ity fanapahan-kevitra henjana nataon'ny orinasa Marck Zuckerberg ity
Digital Car, fampiharana azo alaina ho an'ny mpitsapa ao amin'ny Play Store izay manahaka tanteraka ny fiheverana Android Car
Digital Car for Android, ilay rindrambaiko Car Android misy hevitra ho an'ny tester beta avy amin'ny Play Store Google azy manokana.
Salama Launcher, foto-kevitra vaovao an'ny Launcher izay tena maivana sy miasa
Androany izahay dia manolotra ny Hola Launcher, mpandefa Launcher mahaliana sy maivana ho an'ny Android izay manolotra anay hevi-diso fanolo an-trano somary hafa sy manintona tokoa ho an'ireo terminal.
Arovy ny Android anao tsy ho voajirika amin'ny Tracker Android Hacker
Androany dia manolotra fangatahana fiarovana ny Android izahay antsoina hoe Track Android Hacker.
Tantano amin'ny alàlan'ny Grana ny toekarenao, fampiharana Material Design izay tsy azonao adino
Grana dia fampiharana tsara hifehezana ny harinkarenao amin'ny fanamafisana manokana ny famolavolana amin'ny Material Design
WhatsApp ho an'ny Android ny fambara voalohany amin'ny Material Design
Ny WhatsApp Material Design dia mety ho akaiky kokoa. Ny famantarana dia omena antsika amin'ny alàlan'ny beta vaovao amin'ny fampiharana azo alaina avy ao amin'ny tranokalany.
Ahoana ny fampidinana ny kinova taloha avy amin'ny Google Play
Tianay rehetra ny manana ny kinova farany an'ny rafitra fiasanay, ny fampiharana, sns. Fa indraindray isika dia mety mitaky kinova taloha noho ny antony maro
Camu, ilay fampiharana fanovana sary malaza, tonga amin'ny Android ihany amin'ny farany
Camu dia avy amin'ny iOS miaraka amin'ny hatsaran'ny fampifangaroana ny fiasan'ny fakantsary, ny fanitsiana sary ary ny fahaizana mizara sary amin'ny fampiharana iray
Azonao zaraina amin'ny Android izao ny lalan'ny Google Maps
Ireo tao Mountain View omaly dia nandefa fanavaozana ny Google Maps hahafahanao mizara ireo zotra avy amin'ny teboka iray mankany amin'ny iray hafa mankany amin'ireo mpampifandray anao
T9 mpandefa mpandefa ho an'ny Android tsy toy ny hafa rehetra
Androany dia manolotra anao izahay T9 Launcher, Launcher ho an'ny Android tsy mitovy ary tsy mitovy amin'ny zavatra rehetra fantatrao hatreto momba ny Android.
Manual Camera, ilay fampiharana izay mampiasa ny API 5.0 fakan-tsarimihetsika Android XNUMX Lollipop vaovao
Manual Camera no fampiharana voalohany mampiasa ny API 5.0 fakan-tsary Android Lollipop vaovao, izay mamela azy hanolotra sary avo lenta kokoa
Ny famantaranandro sy ny toetr'andro Widget tsara indrindra amin'ny rantsan-tananao Android miaraka amin'ny Widget Clock ACW Amaze
Androany aho dia manolotra rindranasa maimaim-poana izay misy ny famantaranandro tsara indrindra sy ny Widgets amin'ny toetr'andro ho an'ny terminal Android anay.
Kolombia dia efa manana Internet maimaim-poana amin'ny tanan'ny Facebook
Ny fampiharana Internet.org malaza, izay manome maimaim-poana ny internet, dia tany Kolombia
Fampianarana fototra hanazavana ny fomba marina hisorohana ny fametrahana ny hitsin-dàlana hitsin-dàlana ao amin'ny birao Launcher na Android isaky ny misintona fampiharana avy amin'ny Google Play Store izahay.
[APK] Sintomy ny Google Maps 9.3 miaraka amin'ny fahafaha-mizara torolàlana momba ny zotra
Eto aho avelako ianao alohan'ny hanavaozana azy amin'ny fomba ofisialy ao amin'ny Play Store, ilay kinova Google Maps 9.3 vaovao misy safidy hizarana torolàlana momba ny zotra.
Play Store VS App Store: Google Play dia efa mahazo isan'ny fampiharana ao amin'ny Apple App Store
Ao amin'ny duel masiaka eo amin'ny Play Store VS ny App Store, Android dia mandresy ny lalao amin'ny isan'ny fampiharana sy mpamorona fampiharana voasoratra ao amin'ny Play Store.
Geak OS misy amin'ny Play Store sy amin'ny Espaniôla
Efa manana Geak OS afaka maimaim-poana sy amin'ny Espaniola ao amin'ny Google Play Store izahay.
Fetsy 10 hamoronana fampiharana Android mahomby
Miaraka amin'ny rindranasa maherin'ny telo tapitrisa ao amin'ireo fivarotana fampiharana dia tena sarotra ny mampiavaka ilay rindranasa iray amin'ny hafa.
Ity kinova vaovao ity dia mitondra ny fandikana ny sary miaraka amin'ny resaka mivantana. Seho roa manome kalitao bebe kokoa amin'ny Google Translate
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, maimaim-poana ny recette pizza
Androany ao amin'ny fizarana Applications mba hisakafoanana sy hilelaka ny rantsan-tànanao amin'ny fatra nahandro italianina, ary holazainay aminao ny momba ny fampiharana Pizza Recipe maimaimpoana.
OpenMobile dia mahavita mihazakazaka ny fampiharana WhatsApp Android ao amin'ny Tizen amin'ny alàlan'ny ACL
ACL dia nahavita nanakodia ny fampiharana WhatsApp Android tany am-boalohany tao Tizen, ka nanokatra ny fifandanjan'ny fampiharana Android ho an'ny sehatra finday hafa.
Tsy voafehy ny piraty rindrambaiko Android
Raha tsy manara-maso ireo mety ho mpijirika fitaovana sy programa ny rafitra iray dia mety hisy vokany izany. Ary amin'ny tranga Android, avo lenta tokoa ny piraty app.
Ahoana ny fifehezana sy fampihenana ny mari-pana amin'ny Android misy anao miaraka amin'ny EaseUs Coolphone-Cool Battery
Mahery vaika hatrany ny finday finday avo lenta, ary mety hahatonga antsika hahatsapa fa mihafana ny terminal eto amintsika. Androany dia ho hitantsika ny fomba hifehezana ny mari-pana amin'ny Android
Ahoana ny fomba hamoronana ny Launcher fanao ho an'ny Android
Launcher Lab dia mamela anao hamorona ny Launcher mahazatra ho an'ny Android amin'ny volombava ary avy amin'ny fampiharana tsotra maimaimpoana ho an'ny Android.
Ankoatran'ity endri-javatra ity dia hampidirina ao amin'ny fampiharana Google Translate ny fiasan'ny fandika amin'ny alàlan'ny fakantsary an-telefaona
Joaquim Verges farany nandefa ny Falcon Pro 3 tao amin'ny Play Store
Falcon Pro 3 dia ny mpanjifa Twitter novolavolain'i Joaquim Verges izay nahatratra ny kinova voalohany tamin'ny Play Store tamin'ny fomba tsara indrindra
Barça - Atlético de Madrid maimaimpoana amin'ny Android na solo-sainao manokana amin'ny alàlan'ny Roja Directa
Androany aho manazava fomba maro hijerena ny Barça - Atlético de Madrid maimaimpoana avy amin'ny Roja Directa.
AccuWeather, ny fampiharana toetr'andro tsara indrindra, novaina hanohanana ny Android Wear
ny fampiharana ny toetr'andro tsara indrindra, AccuWeather miaraka amin'ny fanohanan'ny Android Wear feno.
Ahoana ny fomba hanafenana ny sary sy horonan-tsary WhatsApp amin'ny Android
Afeno ny sary, horonan-tsary ary rakipeo avy amin'ny galerin'ny finday avo lenta, mba tsy ho ratsy rehefa mampiseho ny sarinao
Tetika 5 hahazoana ny ankamaroan'ny Google Inbox
Google Inbox dia natomboka tato ho ato ary mamela anao hitantana amin'ny fomba tsara indrindra ny mailaka rehetra tonga ao anaty boaty
[APK] Quickpic 4.0 dia tsy beta intsony ary miaraka amina fanatsarana maro fanampiny
Eto dia manana ny kinova vaovao ianao, amin'ity indray mitoraka ity dia Quickpic 4.0 miaraka amina fanatsarana maro.
[APK] You Tube Downloader v4.4 hisintona atiny avy amin'ny You Tube mivantana amin'ny Android
Androany avelako ianao fampiharana maimaim-poana antsoina hoe You Tube Downloader izay hanampy anay hisintona ny atiny avy amin'ny You Tube mivantana mankany amin'ny Android.
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany, Fun Kitchen
Ao anatin'ny sehatry ny fampiharana an-dakozia dia mihinana Fampihinana sy fisakafoanana amin'ny rantsan-tananay, atolotray anao anio amin'ny Fun Kitchen.
Fampiharana teo aloha an'ny fampiharana Microsoft Office ho an'ny takelaka Android efa ao amin'ny Play Store
Avy amin'ny Play Store, ny fampiharana Microsoft Office toy ny Word, Excel ary PowerPoint dia azo alaina takelaka izao
[APK] Sintomy ny kinova Google Now vaovao miaraka amin'ny OK Google izay navadika tamin'ny efijery rehetra
Izahay dia efa manana ny kinova google vaovao Ankehitriny izay ahafahantsika mampihetsika OK Google navitrika tamin'ny efijery rehetra
Mpitarika WhatsApp amin'ny sehatra misy azy na dia eo aza ny fatiantoka an-tapitrisany
Na dia izy aza no mpitarika tsy iadian-kevitra ao amin'ny sehatry ny fampiharana fandefasan-kafatra eo no eo, WhatsApp dia mampiseho fatiantoka an-tapitrisany amin'ny 2014
[APK] ACEMusic Player ny mpilalao Material Design maimaim-poana ho an'ny Android
Androany aho dia manoro hevitra ny mpilalao Material Design ho an'ny Android antsoina hoe ACEMusic Player 4.0 azo alaina maimaimpoana amin'ny XDA.
Ampandehano ny jiro finday ataonao amin'ny bokotra herinaratra
Amin'ny alàlan'ny fampiharana Power Button Flashlight dia azonao atao ny mampandeha ny jiro finday amin'ny tsindry haingana 3 na 4
Hafatra an-tsoratra SMS mitsingevana miaraka amin'ny SMS Small App
Miaraka amin'ity fampiharana antsoina hoe SMS Small App ity dia afaka mamaly sy mandefa hafatra avy amina varavarankely mitsingevana na aiza na aiza amin'ny telefaona ianao
Ahoana ny fanitsiana ny famirapiratan'ny Android amin'ny tsanganana tsy misy faka
Androany izahay mitondra fampiharana anao hifehezana ny famirapiratana amin'ny bara misy anao amin'ny fotoana rehetra. Fiasa tena ilaina hamonjy bateria
Koala Launcher, ny mpandefa natao ho an'ny zokiolona
Koala Launcher dia Android Launcher natao manokana ho an'ireo zokiolona ao an-trano na olona manana olana amin'ny fahitana.
[APK] QuickPic 4.0 azo alaina miaraka amina fanatsarana maro
Eto ianao dia manana ny apk QuickPic mivantana ao amin'ny kinova beta 4.0 izay tratran'ny fanatsarana toy ny fanohanana ireo lohahevitra Material Design sy ny fampifanarahana ary ny famerenana ireo lahatahiry eo an-toerana ao anaty rahona.
Mamorona ny sivana anao manokana ho an'ny sarinao amin'ny Shift
Ny Shift dia ahafahanao mamorona sivana sary namboarina tanteraka izay afaka manome ny sarinao hikasika manokana
Atombohy ny 2015 amin'ny fampiharana 10 tsara ho an'ny telefaona Android na takelaka misy anao
Fampiharana 10 ho an'ny Android hanombohana ny taona miaraka amin'ireo napetraka tsara indrindra amin'ny findainao toa ny Pushbullet, Link Bubble na Nokia Here Maps
Google dia mandefa lisitr'ireo fampiharana 127 izay tsy maintsy napetraka ao amin'ny telefaona Android na takelakao
KidzInMind, na ny fomba hamelana ny Android ho an'ny zanatsika kely amin'ny fiadanan-tsaina rehetra eto amin'izao tontolo izao
KidzInMind dia rindranasa mahavariana ho an'ny Android, mety indrindra ho an'ny fahafinaretan'ny ankizy kely ao an-trano sy ny fitonianan'ny ray aman-dreny.
Fehezo ny findainao smartphone amin'ny Mobizen
Mobizen dia vahaolana fomba Airdroid maimaimpoana maimaim-poana hifehezana ny fitaovanao finday amin'ny solosainanao
Mpikaroka rakitra vaovao mahaliana antsoina hoe MK Explorer
MK Explorer dia avy amina mpamorona ny forum XDA ary misongadina amin'ny maha kanto azy, maivana ary miasa tsara izy amin'ny fikitikitihana ny Material Design
Mandraisa anjara amin'ny beta ary ampidino maimaim-poana ny Solid Explorer 2.0 Alpha miaraka amin'ny Material Design sy maro hafa
Afaka mandray anjara amin'ny programa Solid Explorer 2.0 beta ianao izao hanandramana ireo zava-baovao momba ny endrik'ity mpikaroka rakitra ity
Araho ny andiany tsara indrindra amin'ny Internet miaraka amin'ny Popcorn Time 1.0, amin'ny farany amin'ny Android
Popcorn tonga amin'ny Android ihany amin'ny farany mba hanolotra ny fahafaha-mahita ny sarimihetsika rehetra sy ny andian-tsarimihetsika tsara indrindra amin'izao fotoana izao
Sinema FV-5, fampiharana iray manontolo ho an'ny fandraketana horonantsary matihanina
Amin'ny Android, toy ny androany, misy ny Sinema FV-5, fampiharana tsara amin'ny fandraisam-peo
Te-hanomana ny terminal Android anao amin'ny Krismasy ve ianao?
Fampianarana tsotra azo ampiharina izay hazavaiko ny fomba fanomanana ny terminal Android anao amin'ny Krismasy ary ampifanaraho izany amin'ireo daty efa mahazatra anao.
Kinova vaovao an'ny Dolphin Browser miaraka amin'ny fanohanan'ny teratany ny Flash amin'ny Android Lollipop ary fanatsarana maro hafa.
Facebook Messenger dia manolotra fanamafisana ny famakiana amin'ny resaka anaty vondrona
Taorian'ny fanovana ny fampiharana Facebook Messenger dia hitantsika fa ny chat group dia misy koa ny fanamafisana ny vakiteny.
'Lollipop' dia tonga amin'ny Apex Launcher, iray amin'ireo mpandefa tsara indrindra amin'ny Android
Apex Launcher version 3.0 dia mitondra ny toetran'ny Android 5.0 Lollipop amin'ny iray amin'ireo mpandefa tsara indrindra
Ny Wallpaper Krismasy tsara indrindra hanamboarana ny Android amin'ireto daty ireto
Ankehitriny dia atolotray anao ny Wallpaper Krismasy tsara indrindra hanamboarana ny Android amin'ireto fety Krismasy manokana ireto, izay mety handany azy miaraka amin'ny fianakaviana sy namana.
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany MSN Recipe
Raha tianao ny fomban'ny Metro, dia mila manandrana ny recette app ianao MSN Recetas, kintan'ny ampahan'ny Fampiharana ataonay hisakafo hariva.
[APK] Misintona sy mametraka ny galerie HTC amin'ny Android rehetra
Androany dia avelanay anao ny apk ho an'ny fametrahana tanana amin'ny Android rehetra, avy amin'ny galeria HTC, fampiharana galeraly miavaka tanteraka amin'ny maodelin'ny terminal Android.
ChatON dia hanidy ny varavarany amin'ny 1 Febroary na dia hitohy any Etazonia aza izany
ChatON, serivisy fandefasan-kafatra an-tserasera an'i Samsung, dia hanjavona iraisam-pirenena amin'ny 1 febrily, na dia hijanona any Etazonia aza izany
WhatsApp feo miantso ny fanomezana tsara indrindra amin'ny taona ho avy
Ny WhatsApp beta vaovao dia mampiseho amintsika antsipirihany vaovao momba ireo antso am-peo WhatsApp andrasana.
Ahoana ny fomba famonoana ny fizahana manga roa sosona ao amin'ny WhatsApp
Amin'ity horonantsary manaraka ity dia asehoko anao ny fomba famonoana ny maso manga roa sosona ao amin'ny WhatsApp avy amin'ny fikirakiran'ny rindrambaiko.
Performance Booster, ampio turbo amin'ny Android-nao mba hanao veloma ny "Lag".
MyRoll Gallery dia galerie mampihetsi-po ary galeri-tsary voalohany ho an'ny Android Wear.
Google dia mampiditra fiasa vaovao amin'ny Drive, Sheets, Presentations ary Docs [Fampidinana APK]
Google dia mitondra vaovao amin'ity alarobia ity ho an'ny andiana fampiharana mandeha ho azy ao amin'ny birao izay ananany ao amin'ny Play Store: Drive, Spreadsheets, Presentations ary Docs
[APK] Sintomy ny Google Maps kinova 9.2 miaraka amina fikirana vaovao
Avelanay ianao eto hisintona ny Google Maps kinova 9.2 hahafahanao mametraka azy alohan'ny olon-kafa.
Wave, ny fampiharana hizarana ny toerana misy anao amin'ny fotoana tena manokana
Ny Wave dia rindrambaiko iray izay miaraka amin'ny tanjona manokana hizarana ny toerana amin'ireo fifandraisana rehetra tadiavin'ny mpampiasa mitokana
YouTube 6.0 dia mitondra zava-baovao miafina izay manandrana manohana ny chat mivantana amin'ny streaming video
Fitaovana Smart Scroll: fampiharana hisorohana ny fikororohana
Ny fampiharana toa tsy misy fiasa lojika dia miditra ao amin'ny Google Play. Androany dia miresaka momba ny Smart Scroll Tools isika, izay manolo ny horonana amin'ny menio
Aza adino ny hetsika kalandrie miaraka amin'ny Notifier amin'ny Kalandrie
Ny Calendar Events Notifier dia fampiharana mahaliana izay tonga mba tsy hanadino hetsika isan'andro amin'ny kalandrie findainao
Ny fanavaozana an'i Google Fit dia manampy hetsika vaovao miisa 100 [Download APK]
Sintomy ny fanavaozana Google Fit vaovao miaraka amina hetsika vaovao miisa 100 sy zava-baovao iray hanandramana hanisa ireo dingana
Action Launcher 3, mpandefa vaovao vaovao an'i Chris Lacy izay nohavaozina indray izao ao amin'ny Play Store
Ny Action Launcher 3 dia misy fiasa vaovao maro ho fampiharana vaovao ary novolavolain'i Chris Lacy. Famolavolana fitaovana sy maro hafa ao aminy
Google Play dia manambara ny fampiharana, lalao video ary votoatin'ny fialamboly indrindra tamin'ny 2014
Google Play dia mampiseho antsika amin'ny infographic ny atiny fialamboly tena nakarina indrindra avy amin'ny Google Play of 2014
Microsoft dia mitondra ny andiana fampiharana avy amin'ny MSN mankany Android
Microsoft dia mitondra ny rindrambaiko MSN mankany amin'ny Play Store. Fomba iray hafa hanatonana ny rafitra fandidiana ho an'ny finday Google
Camera FV-5, fampiharana fakana sary voalohany hanohanana ny API fakan-tsary Android 5.0
Camera FV-5 no rindrambaiko fakan-tsary voalohany nanolotra fanampiana ho an'ny API fakan-tsarimihetsika Android 5.0 vaovao izay nanatsarana fatratra ny fakana sary
DeviantArt dia efa manana ny fampiharana ofisialy ao amin'ny Play Store
Manomboka androany dia afaka manana fantsona fidirana amin'ny zavakanto rehetra ananan'i DeviantArt ianao amin'ny alàlan'ny fampiasana ny fampiharana ofisialy
Nokia Here Maps dia azo alaina ao amin'ny Play Store
Nokia Here Maps dia nahatratra ny Play Store ihany tamin'ny farany rehefa very ny exclusivity nananan'i Samsung. Serivisy sari-tany an-tserasera tsara
Ahoana ny fomba fampidinana mozika mp3 mivantana avy amin'ny terminal Android anao
Anio dia asehoko anao ny rindranasa iray izay azonay alaina amin'ny fomba ofisialy avy amin'ny Play Store an'ny Google manokana ary hanampy anay hisintona mozika amin'ny mp3.
Hangouts dia mahazo ny anjarany Material Design, sivana ho an'ny antso an-tsary, emoji vaovao ary maro hafa
Hangouts anio dia manana kinova vaovao izay misy vaovao mahaliana isan-karazany toy ny fahaizana mampihatra sivana amin'ny antso an-tsary
Maimaimpoana tanteraka ny Traffic Monitor ao amin'ny Play Store hahafahana mampiasa ireo tombony atolotra azy rehefa mifehy ny fanjifana angona
VLC ho an'ny Android dia mamela ny beta amin'ny farany ho tonga amin'ny kinova miorina ao amin'ny 1.0. Fampiharana tena tsara hilalao atiny multimedia
Raha manana Android taloha ianao dia ampio Kit Kit miaraka amin'ny Swipe Status Bar
Na dia efa miresaka momba ny Lollipop sy ny fanovana miaraka aminy aza isika, raha manana Android taloha ianao dia azonao omena Kit Kit miaraka amin'ny Swipe Status Bar.
Rovio dia nanambara ny fandroahana mpiasa 110 sy ny fanidiana ny studio ao Tampere
Rovio, lehiben'ny franchise Angry Birds malaza, dia nanambara ny fandroahana olona 110 ho isan'ny famerenana amin'ny laoniny ara-bola ny orinasa
Memory Map dia sary an-tsaina ny toerana malalaka sy ampiasaina an'ny memoara anatiny na SD an'ny findainao Android
Memory Map dia manandrana maka sary an-tsaina ilay toerana ampiasaina sy tsy misy fahatsiarovan-tena ao anaty finday na tablette Android
ACW: Amaze Clock Widget, widget iray famantaranandro maimaim-poana ho an'ny Android izay tsy azonao adino
Fehezo ny faritra amin'ny faritra samihafa amin'ny planeta amin'ny alàlan'ny widgets famantaranandro ACW isan-karazany: Amaze Clock Widget
Handika ny feo sy ny soratra amin'ny fotoana tena izy ny Google Translate
Fanavaozana vaovao amin'ny Google Translate no ahafahan'ny serivisy malaza handika lahatsoratra sy feo amin'ny fotoana tena izy
Avelanay eto aminao ny tsanganana 6.0 an'ny You tube miaraka amin'ny fanovana azo antenaina ho Material Design mba hahafahanao misintona azy mivantana amin'ny APK ary mametraka azy amin'ny tanana.
Ahoana ny fametrahana apetraka CyanogenMod amin'ny telefaona rehetra?
Raha tadiavinao foana ny hanana ny sasany amin'ireo rindrambaiko ho an'ny CyanogenMod amin'ny terminal tsy misy ROM alefa, dia tokony manandrana CyanogenMod App Installer ianao
Fampihinana sakafo hariva misakafo rantsan-tànana: Androany, Allrecipes Dinner Spinner
Manohy eo amin'ny sehatry ny Fampiharana izahay hisakafo hariva sy hilelaka ny rantsan-tànana, miverina amin'ny resipeo an-jatony amin'ny Allrecipes Dinner Spinner izahay.
Lenovo K3 «Music Lemon» ny telefaona hifaninana amin'i Xiaomi Redmi amin'ny $ 100 latsaka
Mazava ny tanjon'ny Lenovo K3 Music Lemon: mifanatrika amin'i Xiaomi Redmi miaraka amin'ny telefaona tsy mihoatra ny 100 dolara
Sintomy ny kinova vaovao an'ny Play Store miaraka amin'ny tantaran'ny fividianana ho zava-baovao [fampidinana APK]
Ny Play Store dia mitondra vaovao maromaro, iray toy ny tantaran'ny fividianana sy ny hafa mifandraika amin'ny Material Design sy ny endriny hita maso
[APK] Ahoana ny fomba hampanginana ny feon'ny fakantsary nefa tsy mila miorim-paka
Androany aho manazava fomba tsotra hampanginana ny feon'ny fakantsary Android nefa tsy mila miorim-paka amin'ny fakantsary
Endri-javatra 5 mampino an'ny Chrome ho an'ny Android izay mety tsy fantatrao
Endri-javatra 5 an'ny Chrome ho an'ny Android izay azo alefa amin'ny fanandramana na amin'ny alàlan'ny menio fanovana
Fetsy Android hahafahana misintona APK mivantana avy amin'ny Google Play Store
Ny fahalemena vaovao iray hafa amin'ny fiarovana ny fampiharana fandefasan-kafatra eo noho eo dia ahafahantsika manapaka ny WhatsApp amin'ny alàlan'ny fandefasana hafatra an-tsoratra fotsiny ny 2KB amin'ny lanja tanteraka.
Ny efijery AZ Screen Recorder dia mitahiry amin'ny Android 5.0 nefa tsy mila miorim-paka
AZ Screen Recorder dia fampiharana tonga lafatra ho an'ny Android 5.0 tsy mila miorim-paka sy handraikitra ny efijery
Google News and Weather dia novaina ho amin'ny andiany 2.2 miaraka amin'ny fanatsarana toy ny lohahevitra maizina, fikarohana anatiny, kisary vaovao ary ny fihodinan'ny lafiny eo amin'ny sokajy.
Androany aho dia manolotra rindranasa tsotra nefa mahasoa izay hanampy antsika hanao backup amin'ny IMEI an'ny terminal Android-nay
Amin'ny alàlan'ny modely Xposed dia azonao atao ny mametraka ny Windows Taskbar ary manomboka ny Menu amin'ny Android
Fampiharana sakafo hariva misolelaka rantsantanana; Androany i Nenitoa Florita
Raha tianao ny fampiharana miaraka amin'ny horonan-tsarimihetsika, dia ho tianao ny kintan'ny ampahan'ny Fampiharana ataonay amin'ny fisakafoanana hariva sy ny fanondroana ny rantsan-tànana; Nenitoa Florita.
[ROOT] Sintomy ary apetaho ny keyboard Samsung Galaxy S5 amin'ny Android rehetra
Ireto ny fisie ilaina rehetra mba hampidinana sy hametrahana ny keyboard Samsung Galaxy S5 amin'ny Android rehetra, ary koa ny fizotran'ny fametrahana marina.
Firefox ho an'ny Android izao miaraka amin'ny fitaratra fitaratra amin'ny Chromecast
Ankehitriny Firefox for Android dia mahazo fanohanana feno amin'ny fitaratra amin'ny alàlan'ny Chromecast an'i Google.
Apetraho amin'ny terminal terminal OLED ny kaody Knock an'ny LG
Ity misy rindranasa iray izay mampanantena ny haka tahaka ny kaody Knock an'ny LG, na dia misy endri-javatra maro hafa aza.
Omeo loko bebe kokoa ny sary an-tsoratry ny findainao amin'ny Papuh Walls
Ny Papuh Walls dia manana fotoana fohy iainana, fa noho ny interface tsara sy hametrahana andian-tsarimihetsika tsara hapetraka amin'ny findainao
Piktures dia mpijery sary tena tsara izay manana tombana mialoha ho an'ny Material Design ary interface tsara tsy misy tara
Na dia somary ratsy tarehy aza tsy misy Material Design, ZArchiver dia mpitantana rakitra matanjaka hanokatra karazana endrika rehetra
Fampiharana tsy maintsy ananana amin'ny Android Wear; Androany Binary Watch Face
Androany aho dia manoro hevitra ny Binay Watch Face, ilay famantaranandro binary ho an'ny fiambenana Android Wear anao. Ampiarahiko ihany koa ny fanazavana momba ny fomba fiasan'ity karazana famantaranandro binary ity.
Lumific dia fampiharana galeria vaovao hisolo ny Google+ Photos
Lumific dia fampiharana iray izay ny tanjony lehibe dia ny hanolo ny Google+ Photos ao amin'ny Android 5.0. Mahaliana sy voakarakara tsara amin'ny famolavolana ity fampiharana vaovao ity
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android; Androany ZUI Locker
Androany izahay dia manolotra anao amin'ny fampiharana tsy mampino ho an'ny Android ZUI Locker, fampiharana fanolo ho an'ny efijery hidin-trano Android, tena tsara sy miasa.
Better Diary dia mety ho diarinao manokana manomboka izao
Better Diary dia rindranasa lehibe izay tonga tonga diarinao manokana hizaranao amin'ireo namanao na olona ifandraisana aminao
Misafidy ny fampiharana Android tsara indrindra amin'ny 2014 i Google
Misafidy ny fampiharana Android tsara indrindra amin'ny taona 2014 i Google izay mampiseho azy ireo amin'ny Google Play sy amin'ny Androidsis dia mifantina izay tsara indrindra izahay
Fampiharana 3 hamerenana sary voafafa avy amin'ny Android
Loza ve ianao raha hamafana sary? Androany dia asehonay anao ireo app 3 hamerenana ireo sary voafafa avy amin'ny Android anao, ary andramana hamerina azy ireo any.
WeLine no vahaolana mahomby sy mahavariana indrindra amin'ny Airdroid hampifandray ny Android sy ny solo-saintsika manokana fa tsy mila tariby.
MarkO, mpitantana asa iray izay hampandre anao araka ny toerana misy anao
Marko dia hahatadidy ireo asa tokony hatao arakaraka ny toerana misy anao. Rindrambaiko mpitantana asa tena mahaliana
Ahoana ny fomba ahafahana manome ny laharana fahadimy amin'ny Google keyboard Google
Anio dia asehonay anao ity #TrucoAndroid ity hahafahan'ny laharana laharana fahadimy amin'ny klavin'i Google
Hummer Launcher, ilay mpandefa maivana indrindra indrindra amin'izao fotoana izao
Hummer Launcher dia launcher marani-tsaina vaovao ho an'ny Android anao, iray amin'ireo maivana sy miasa indrindra misy ao amin'ny Google Play Store.
[APK] Antso tsy hita amin'ny fomba Lollipop amin'ny Android 4.0 na avo kokoa
Te hanana fampandrenesana antso an-tarobia amin'ny fomba Lollipop ianao? Azo atao izao noho ny fampiharana L-Call avy amina mpamorona iray avy amin'ny XDA Developers.
Aorian'izay dia hasehoko anao ny fomba fampidinana sy fametrahana ny fampiharana Walkman an'ny Sony Xperia Z3 amin'ny Android 4.2 na ny terminal avo kokoa
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android; Androany Cobo Launcher
Cobo Launcher dia mpandefa maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay misongadina amin'ny hafainganam-pandehany sy ny fanaingoany amin'ny alàlan'ny lohahevitra azo sintomina avy amin'ny fampiharana azy manokana.
Ny mpilalao horonan-tsary MX Player dia manohana ny Android 5.0 Lollipop ankehitriny
MX Player dia mpilalao horonantsary ilaina amin'ny Android ary efa manolotra fanohanana ny fanavaozana ny Lollipop vaovao
Fampiharana mahavariana 5 ho an'ny ROOT amin'ny Android
Fampiharana 5 ho an'ny mpampiasa ROOT izay manolotra fampiasa fanampiny hanome elatra ny terminal Android anao
Fampiharana 3 izay mampiasa loha-chat izay ho tianao
Raha iray amin'ireo izay tia fampandrenesana eo amin'ny efijery ianao, fa izay tianao fotsiny dia ho tianao ireo rindranasa 3 ireo izay mampiasa lohateny chat.
QuickPic dia mahazo ny anjarany amin'ny Material Design ao amin'ny kinova vaovao [APK]
Ny famolavolana fitaovana dia tonga amin'ny QuickPic hanatsara ny interface sy ny endrika isehoan'ny fampiharana sary Android tsara indrindra
Cerberus dia mamaky ny kinova 3.0 amin'ny fanavaozana lehibe
Cerberus no fampiharana fiarovana Android tsara indrindra. Ny Version 3.0 dia mitondra fiasa vaovao mahafinaritra sy fepetra fiarovana matanjaka
Sintomy ary apetaho ny famantaranandro Android Lollipop amin'ny terminal Android 4.0+
Eto ianao manana ny fampiharana Android Lollipop Clock ho an'ny fametrahana amin'ny Android 4.0 na avo kokoa.
Afaka fantatrao izao hoe iza no manoratra amin'ny vondrona ao amin'ny WhatsApp
WhatsApp dia mitondra ny fahaizana mahita izay manoratra ao anaty vondrona miaraka amin'ny beta vaovao 2.11.451
Telegram 2.0 dia eto miaraka amin'ny Design Material, kaonty manimba tena ary maro hafa [APK]
Telegram dia mitondra vaovao lehibe ho an'ny Material Design sy ny fahaizana manimba ny kaonty amin'ny zavatra maro hafa
Z Launcher Beta, ny Nokia Launcher marani-tsaina izay efa hita ao amin'ny Play Store
Afaka mahazo amin'ny fomba ofisialy ny Nokia Z Launcher Beta amin'ny Google Play Store iray ihany izahay.
Ny mpiara-manorina ny Twitter dia mandefa ny tambajotra sosialy maivana sy miloko amin'ny fizarana hevitra [Nohavaozina]
Super dia rindrambaiko vaovao na tambajotra sosialy ahafahanao mandefa karazana hevitra rehetra miaraka amin'ny sary, andian-teny adala ary sarimiaina mahatsikaiky. Traikefa tsy manam-paharoa
AtresPlayer, ny fahitalavitra amin'ny ho avy dia efa manohana an'i Chromecast
Vaovao tsara ho an'ny mpanaraka rehetra ny vondrona AtresMedia, dia ny hoe AtresPlayer farany efa manohana an'i Chromecast, tsy isalasalana fa ny fahitalavitra amin'ny ho avy
Fampiharana tsy maintsy ananana amin'ny Android Wear; Mamiratra anio
Hatreto dia tsy olana izany, saingy tsy azonao atao ny manitsy ny famirapiratan'ny smartwatches amin'ny Android Wear. Ankehitriny Display Brightness no mahasoa anao.
Mizarà fanamarihana sy lisitry ny raha-hatao amin'ny fotoana tena izy miaraka amin'ny kinova Google Keep [APK]
Ny kinova vaovao an'ny Keep dia mitondra fanatsarana mifandraika amin'ny fahaizana mizara naoty sy lisitra tokony hatao amin'ny fotoana tena izy
Google Play Services dia nohavaozina amin'ny API sy fanatsarana vaovao ho an'ny fampiharana Google [APK]
Ireto Maps, Wallet, Drive ary Fit API vaovao ireto dia hamela ireo mpamorona antoko fahatelo hahazo bebe kokoa amin'ny fampiharana azy manokana
Free Screen Recorder maimaim-poana na ny fomba firaketana ny efijery Android tsy misy fetra ary maimaim-poana tanteraka
Manaraka izany dia manazava ny fomba firaketana ny efijery amin'ny Android maimaim-poana ianao, tsy mila Root ary tsy misy fetr'andro.
Yelp, mpitari-dàlana fialan-tsasatrao amin'ny fitadiavana ireo toerana mety hihinana sy hisotro ary hiantsenana
Yelp dia fampiharana mahaliana izay ahafahantsika mahafantatra ireo trano ara-barotra izay misy eo amin'ny faritra misy antsika, na hivoaka, hihinana na hividy
Textra, ny fampiharana maharitra ho an'ny SMS sy MMS
Textra SMS dia iray amin'ireo mpanjifa tsara indrindra amin'ny hafatra an-tsoratra sy multimedia izay nandramako tato anatin'ny roa volana.
Andramo maimaim-poana amin'ny Gear S Experience ny Samsung Gear S
Manaraka izany dia hazavao aminao ny fizahana ireo fiasa rehetra omen'ny Samsung Gear S ho antsika, ny smartwatch tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Fampiharana mahavariana ho an'ny Android; Androany UnlockYourBrain, ny efijery hidin-trano hianaranao amin'ny alàlan'ny fanokafana ny Android
UnlockYourBrain dia rindrambaiko hanolo ny efijery hidin-tranonkalanay Android amin'ny iray hafa ahafahantsika mianatra zava-baovao isan'andro.
Smart Launcher 2 dia mpandahatra Launcher miasa sy azo ovaina indrindra mifantoka amin'ny famokarana
Smart Launcher 2 dia iray amin'ireo mpandefa tsara indrindra azontsika sintonina ho an'ny Android raha toa ka ny zavatra tadiavintsika dia minimalism, fampiasa ary famokarana mihoatra ny zava-drehetra.
VSCO Cam dia havaozina amin'ny interface vaovao, kalitaon'ny sary tsara kokoa ary fakan-tsary nohavaozina
Fanavaozana lehibe sy lehibe ho an'ny VSCO Cam miaraka amina interface vaovao, sary namboarina ary namboarina niaraka tamin'ireo fitaovana rehetra
Misy kinova Chrome azo tsapain-tanana ankehitriny miaraka amin'ny fatrany Material Design [APK]
Ny kinova miorina 39 an'ny Chrome dia misy ankehitriny miaraka amin'ny Android 5.0. Tsy mitondra fiasa vaovao maro izy io fa mitovy amin'ny Lollipop
Mamorona radio anao manokana miaraka amin'ny studio fandraisam-peo Spreaker Studio for Android
Spreaker Studio dia studio fandraisam-peo kely misy fitaovana rehetra handefasana mivantana na hamoronana Podcasts
Azonao atao izao ny manafina ny maso manga indroa miaraka amin'ny WhatsApp beta [Download APK]
Efa manana ny kinova beta an'ny WhatsApp izahay izay mamela anay hanafina ny maso manga roa sosona izay nanova ny planeta iray manontolo
Nohavaozina ny Adobe Aviary miaraka amin'ny Toolkit Free $ 200
Miaraka amin'ny fanavaozana vaovao Aviary dia manolotra fitaovana 130 sarobidy amin'ny $ 200 mandritra ny volana Novambra. Fampiharana iray manontolo ho an'ny famerenana sary indray
Ahoana ny fanisana ny fotoana laninao amin'ny media sosialy
Amin'ny fiankinan-doha ara-tsosialy dia azonao isaina ny fotoana laninao amin'ny fampiasana tambajotra sosialy amin'ny Android
Smart Screen Launcher, mpandefa iray izay zatra isan'andro isan'andro
Androany aho te-hanome soso-kevitra momba ny Smart Screen Launcher, Android Launcher mahaliana sy manan-tsaina izay mifanaraka amin'ny filan'ny andavan'andro.
Misy Messenger ankehitriny, ny fampiharana Google an'ny SMS sy MMS
Ny fampiharana Google vaovao ho an'ny hafatra SMS sy MMS dia antsoina hoe Messenger ary vonona ny hijanona izy io
[APK] Sintomy ny famolavolana fitaovana Google Keep 3.0
Eto ianao manana ny apk an'ny Google Keep 3.0 Material Design endrika vaovao hahafahanao mamoaka azy alohan'ny olon-kafa.
Google dia manambara ny lakilen'ny mozika YouTube miaraka amin'ny filalaovana tantara an-tsarimihetsika, tsy misy doka ary maro hafa
YouTube Music Key dia misy fiasa lehibe: playback background, audio offline ary fanesorana doka
Ahoana ny fomba mora hanefena ny efijery Android 4.4+ anao
Anio dia asehoko anao ny fomba tsotra sy maimaim-poana hanaovana ScreenCast amin'ny efijery Android anao amin'ny Android versi 4.4 na avo kokoa.
Hidio ny fampiharana manokana anao amin'ny Oops! AppLock ho an'ny Android
Miaraka amin'ity rindrambaiko antsoina hoe Oops! AppLock dia afaka manakana ny apps amin'ny fomba tsara indrindra amin'ny alàlan'ny fanalahidy volume miaraka amina lamina iray
[APK] Ny Android Lollipop LockScreen ho an'ny Android 4.0 sy ambony
Eto ianao dia manana rohy mivantana mankany amin'ny Play Store ary koa ny APK hampidina ny Android Lollipop LockScreen.
Ahoana ny fomba hanafenana ny maso manga roa heny an'ny WhatsApp raha tsy manakana ny Internet
Androany dia manoro hevitra anao aho fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android izay hanampy anay hanafina ny maso manga roa sosona an'ny WhatsApp ary tsy fantatr'izy ireo fa efa namaky ny hafatra voaray izahay.
QKSMS, fampiharana ho an'ny hafatra SMS feno fiainana sy loko
Ny Material Design dia misy ao amin'ity rindrambaiko fandefasana hafatra ity sy amin'ny fomba tsara indrindra hanomezana ny loko mety sy ny sary mihetsika maro loko
Instagram 6.10 dia mamela ny fanontana ny famoahana efa natomboka ary hahita fifandraisana vaovao avy amin'ny "Browse"
Efa nanana ny mety izahay fa amin'ny fanohanana faka Android 5.0 dia tsy ilaina amin'ny firaketana ny efijery terminal. Ankehitriny dia misimisy kokoa ny fampiharana manampy ny asany.
Raha manana terminal Android misy bokotra ara-batana vaky ianao, amin'ity lahatsoratra manaraka ity dia hasehonay anao ny safidy maimaim-poana mba hiasa ny fitaovana Android anao tsy misy olana.
Mamorona widgets mitsingevana miaraka amin'ny Overlay ho an'ny Android
Overlay dia manandrana mitondra widgets mitsingevana rehefa misy mpampiasa iray ao anaty app iray, manome vokatra be amin'ny Android
[APK] Sintomy ny Google Maps 9.0 ho an'ny «Android Design» rehetra Android na avo kokoa.
Eto ianao manana ny kinova hamoahana ny Google Maps 9.0 mivantana ao amin'ny AK araky ny Android Android ankehitriny.
Ny fampiharana sary 4 tsara indrindra ho an'ny Android
Android dia manana fampiharana tsara ho an'ny sary, araka ny hita amin'ny efatra izay entintsika avy amin'ny Androidsis amin'ity alatsinainy ity
Energy Music Box BZ6, mpilalao manome zavatra betsaka kokoa noho ny mahita azy
Na eo aza ny endriny Retro, ny Energy Music Box BZ6 dia mpilalao afaka manolotra asa maro tena mahaliana antsika.
Fehezo ny tambajotra sosialy rehetra amin'ny fampiharana iray
Androany aho manazava fomba iray tsara hifehezana ny tambajotra sosialy amin'ny fampiharana iray ary hanatsara ny fahombiazan'ny terminal Android anay.
Ahoana ny fomba hijerena horonantsary any aoriana ao amin'ny Android miaraka amin'ny FREEdi
Raha iray amin'ireo mampiasa YouTube mihaino mozika na atiny ianao, ary maniry ny hametraka ilay app ho any aoriana, dia ho liana amin'izay omen'ny FREEdi anao ianao.
Nike + Running dia mifanaraka amin'ny Google Fit
Raha te hihazakazaka ianao dia manana vaovao tsara ho anao: ny fampiharana Nike + Running dia nahitana ny fampidirana Google Fit ao amin'ny fanavaozana farany. Ka izao i Nike dia miditra amin'ny rindranasa malaza hafa ho an'ny atleta toa an'i Runtastic, izay mifanaraka amin'ny Google Fit ankehitriny.
Sintomy ary apetraho ny calculator Android Lollipop amin'ny android 4.3 na avo kokoa
Eto ianao manana ny calculator Android Lollipop, iray amin'ireo fampiharana vitsy miaraka amin'ny lafin-javatra Design Material izay mbola tsy maintsy nozarainay.
Hanampy safidy iray i WhatsApp mba hamonoana ilay maso manga roa sosona hahazoana fanamafisana ny famakiana
Ny adihevitra momba ny fahafantarana raha efa novakiana na tsia ny hafatray dia nahatonga an'i WhatsApp handinika safidy iray hanakanana ny fanamafisana ny vakiteny.
Raha mihaino anao i Yummly, saingy nitaraina foana ianao momba ny tsy fahafahanao mampiasa azy io amin'ny Android, androany dia manolotra vahaolana tsotra izahay satria mahatratra ny Applications hisakafo hariva ary milelaka ny rantsan-tànanao.
Mamorona fampahatsiahivana ho an'ny fifandraisana rehefa miantso azy ireo amin'ny FloatNote for Android ianao
FloatNote dia handefa naoty pop-up rehefa miantso fifandraisana iray amin'ny Android izahay
Fomba roa hanodinkodinana ny fizahana indroa WhatsApp mba tsy hahafantaran'izy ireo fa efa namaky hafatra tonga ianao
Fomba roa hanodikodinana ny fizahana indroa an'ny WhatsApp izay toa tsy nisy olona naharesy lahatra azy fotsiny.
Afaka mandefa hafatra an-tsoratra amin'ny solosainao amin'ny alàlan'ny PushBullet amin'ny telefaona ianao izao
Hatramin'ny omaly dia afaka mandefa hafatra an-tsoratra amin'ny solosaina amin'ny Pushbullet amin'ny alàlan'ny telefaona amin'ny Android ianao
Izay rehetra voalaza ao amin'ny tambajotra sosialy misy ny hafatra vakiana amin'ny WhatsApp
Vao nanampy an'i WhatsApp ny asany malaza amin'ny famakiana hafatra, ary vao nanomboka tao amin'ny tamba-jotra sosialy ny revolisiona. Mety sa tsy mety?
WhatsApp dia efa mampahafantatra anao rehefa misy hafatra novakian'ny mpandray
Ao amin'ny fanavaozana WhatsApp ofisialy farany, ny fampiharana hahafantarana rehefa nisy namaky ny hafatra ny mpandray azy dia efa nampiharina.
Tonga any Espana ny fampiharana mampiaraka
Natao i Happn hanampiana ny olona hanararaotra ireo fifanandrifian-javatra kely mety hitranga amin'ny olona toa anao eo amin'ny tontolo iainanao
Fampiharana Android mahatalanjona: Androany XMTV Player Android Media Player Izay mamaky azy rehetra
XMTV Player no mpilalao haino aman-jery maimaimpoana maimaimpoana ho an'ny Android izay mahazaka ny zava-drehetra sy ny zava-drehetra.
Ahoana ny fomba ahazoanao ny fanasana anao amin'ny Google Inbox
Eto aho dia manazava ny fomba ahazoako fanasana amin'ny Google Inbox, amin'ny fomba maro azo apetraka ankoatra ny fanomezana ilay fanasana manokana farany navelako hanandramana ity fampiharana manaitra ity.
[Nohavaozina] OK Google miasa amin'ny efijery rehetra na amin'ny Espaniôla aza
Ankehitriny isika dia afaka mankafy amin'ny fomba ofisialy ny baikon'ny OK feo Google miasa amin'ny efijery rehetra, na dia amin'ny fiteny espaniola aza.
Mametraha Android L multitasking amin'ny Android 4.0 na avo kokoa
Eto ianao dia manana rindranasa maimaimpoana ho an'ny Android izay hanahafana ny multitasking an'ny Android L amin'ny kinova Android hafa.
[APK] Google Calendar 5.0, misintona ary mametraka Google Calendar ho an'ny Android 5.0 Lollipop
Eto ianao dia manana ny iray amin'ireo apk vitsivitsy izay tsy hita teo amin'ireo fampiharana Google nohavaozina ho Material Design. Google Calendar 5.0 ho an'ny Android 4.0.3 sy ambony rehetra.
Fampiharana Android 3 miaraka amin'ireo hatsaran-toetra rehetra amin'ny Material Design ao amin'ny Android 5.0 Lollipop
Material Design no lamina famolavolana vaovao hita ao amin'ny Android 5.0 Lollipop ary hita ao amin'ireo fampiharana ireo amin'ny fomba tsara indrindra.
[APK] Gmail 5.0 ho an'ny fisintomana amin'ny kinova famaranana
Eto ianao manana ny kinova farany an'ny Gmail 5.0 amin'ny apk ho fisintomana sy fametrahana / fanavaozana ny tanana raha tsy mila Root na zavatra toa izany.
Google Calendar dia nohavaozina, Google dia nanamboatra endrika ny fampiharana azy miaraka amin'ity fanavaozana vaovao ity, amin'ny endrika sy ny fiasa, andeha hojerentsika izy ireo.
Ny fampiharana Microsoft 3 tsara indrindra ho an'ny Android
Microsoft dia mandefa fampiharana bebe kokoa ho an'ny Android manana repertoire midadasika kokoa rehefa mandeha ny volana
AlertCops, hanairana ny herim-piarovan'ny fanjakana mivantana amin'ny vonjy taitra
AlertCops dia fampiharana vaovao an'ny Ministeran'ny Atitany izay manampy antsika hanaitra ireo mpitandro ny filaminana isan-tsokajiny momba ny fampandrenesana maika na fiarovana.
xPlod, ilay mpilalao mozika endrika Design Material
xPlod dia mpilalao mozika Android 5.0 Lollipop Material Design maivana ary maivana ary loharano malalaka.
Textra SMS dia fampiharana tonga lafatra hitantanana ny hafatra SMS rehetra amin'ny Android
Textra SMS dia manana endrika manasongadina manasongadina ny endriny hita maso amin'ny Material Design an'ny Android Lollipop
[APK] Sintomy ary apetraho ny tsimbadika vaovao an'ny Play Store miaraka amina Design Material (5.0.37) bebe kokoa
Eto ianao manana ny kinova vaovao an'ny Play Store 5.0.37 miaraka amin'ny Design Material bebe kokoa, kinova akaiky kokoa ilay iray izay hiaraka amin'ny fahatongavan'ny Android 5.0 Lollipop.
[APK] Sintomy ny Gmail 5.0, miaraka amin'ny fanohananana ireo kaonty mailakao rehetra
Efa misy Gmail 5.0 azo alaina ho an'ny fametrahana raha tsy mila ROOT na manaraka tutorial sarotra, misintona fotsiny ary tsindrio ilay apk mihitsy.
BBM ho an'ny Android dia havaozina mamela anao hamafa hafatra sy handefa hafatra manimba tena
Ankehitriny ny kinova BBM ho an'ny Android dia hamela anao hamafa ireo hafatra nalefa ary hametraka fotoana famakiana ho an'ireo hafatra tadiavinao.
Mampatahotra ny namanao azo atao amin'ny fampiharana ity ho an'ny Android
Androany izahay dia manazava fomba tsotra sy mahomby hampitahorana ny namanao amin'ny Halloween miaraka amin'ny fampiharana maimaim-poana ho an'ny Android.
[APK] Ny Asus Launcher, mpitety tranonkala ary Quick Notes ho an'ny Android rehetra
Avelako ianao hisintona anao mivantana, seranan-tsambo miasa amin'ny Asus Launcher, browser Internet Asus ary Asus Quick Notes.
Flipboard 3.0 ankehitriny misy amin'ny famolavolana endrika lehibe ary maro hafa
Flipboard 3.0 tonga manavao ny famolavolana ny fampiharana ary mitondra fiasa vaovao sasany toy ny Daily Edition.